Publications – Institute for Strategy and Policy – Myanmar
ဒီမိုကရေစီတပိုင်း စပ်ကြားအုပ်စိုးမှု စနစ်အောက်မှ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ နိုင်ငံရေး အမှတ် ၁၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ တပ်မတော် ကျောထောက် နောက်ခံပြုထားတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီအစိုးရကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အစိုးရကို ၂၀၁၆ ဧပြီလမှာ အာဏာ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့ ဒုတိယအဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။...
The reform process and the subsequent political and economic changes in Burma/Myanmar have sparked great investment interest among governments and the private sector in the region and beyond. Large-scale investment projects are focused on the borderlands, which is where most of the natural resources in Burma – and indeed the Mekong region – are to be found. These areas are home to poor and often...